Maxkamadda burcadda ee kenya - BBC Somali
Maxkamadda burcadda ee kenya
Image caption Burcad baddeed jooga xeebta Soomaaliya
Wasiirrada Kenya ee toos ugu lug leh heshiiska Maxkamaddan lagu asaasay ayaa sheegay in Kenya culeys weyn lagu saaray in ay aqbasho Maxkamaddan.
Nation wuxuu leeyahay xubnaha joogtada ah ee golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Kenya culeys ku saaray hirgelinta Maxkamadaha.
Sida ay qortay barta internetka ee wargeyska Daily Nation, Wasiirka Garsoorka, Mutula Kilonzo, ayaa ku tilmaamy in Kenya qoorta loo suray go'aan keeni kara in dalkeeda lagu soo qaado weerar argagixiso oo aargoosi ah.
Wasiirka Arrimaha Dibadda, Moses Wetangula, ayaa isaguna sidaa la qaba Kilonzo sida uu sheegay Nation.
Khamiistii aya kenya laga furay Maxkamad qaadda dacwadaha ka dhanka ah dadka lagu soo qabtay waxay si gaar ah u dhegeysan doontaa dadka lagu soo qabtay falal burcad badeed ama lagu tuhmay in ay gacan ka geysteen ama ay damacsanayeen.
In ka badan 120 Soomaali ah oo lagu tuhmay falal burcadnimo xagga badda ah ayaa ku xiran jeelasha magaalada Mombasa ee dalka Kenya.
Afartii sano ee na soo dhaafay, Kenya waxay xukun ku qaadday 18 Soomaali ah oo lagu xukumay dembiyo burcad badeed.
Kenya hore ayay u sheegtay in ay joojisay maxkamadeynta Soomaalida dembiyadan lagu soo oogo, hase yeeshee in Maxkamad dembiyaad loogu tala galay laga furay Mombasa ayaa muujineysa in ay dacwadahan lagu qaadi doono Kenya.